SM.Hargeysa) Guddomiyaha Ururka Wadaniga ah ee ODHA Marwo Faaddumo Siciid ayaa Jawaab ka bixisay Hadalkii ka soo yeedhay Madaxweynaha Somaliya ee ahaa in Somaliland iska Dayso Caadifada oo ay ilaaliso Midnimada, iyada oo sheegtay in uu hadalkaasi shacabka reer Somaliland ay ka xumaadeen oo uu yahay hadal aan loo dulqaadan karin, wax kale oo ay Xukumadda Somaliland ku Taageertay Go’aankii ay ku joojisay Duulimaadyadii Qaramada ee Somaliland Imanayey.
Siddasi waxay ku sheegtay Shir jaraa’iid oo ay ku qabtay Maanta Xafiiskeeda Magaaladda Hargeysa.
Faadumo Siciid oo ugu horeyn ka hadlaysa Hadalkii Ka soo yeedhay Madaxweynaha Somaliya oo uu ku sheegay in midnimadu tahay mid Muqadis ah iyada oo arrintaasi ka hadlaysa Waxay tidhi. “Runtii Dhawaaqa ka soo yeedhay Madaxweynaha Somaliya ma ah Mid Qadiyada Somaliland wax yeelaya, Hadalkaasi Runtii Qadiyadeena ayuu sii xoojiyey waayo Shacabkeena ayaa Isku Duubnidoodii sii xoojiyey, Marka Dee Madaxweynaha Somaliya Waa looga Wanaagsanaa in uu hadalka noocasi ahi uu afkiisa ka soo baxo oo uu yidhado Somaliland Hayska dayso Caadifada, Marka isagu Somaliland wuu ogyahay in ay Tashatay, meel dadka reer Somaliland ka soo Noqdaana ma jirto.”
Iyada oo hadalkeeda Sii wadatan waxay tidhi “Lakiin Isaga oo kali ah ma ah Madaxweynayaasha Somaliya soo Maray Mid walba hadalkaasi way odhan jireen, Tusaale ahaan Haddii uu Qaasin ahaa, haddii uu Cabdilaahi yuusuf ahaa, Haddii uu sheikh Shariif ahaa, iyo haddii uu yahay kan madaxweynaha ka ah meeshasi mid waliba Waxa uu yidhahadaa Waxaan ahay Madaxweynaha Min Saylac ilaa Raaskaanbooni, marka waa cadadooda in ay somaliland iska Sheegtan, lakiin Somaliland waa Dal madaxbanaan oo aan Cidina Xukumin oo dawlad ah oo tashaday, Somaliland Cidna u joojin mayso, Dawladnimadeedana way ku Adagtahay, halkan uu leeyahay Somaliland Caadifad ayaa qaaday anigu waxan leeyahay Wallee isagay Caadifadii qaaday oo shaadh aan leekayn xidhay, Ma Ninka Ciidamo Amison ahi Madaxtooyadda ku ilaalinayaan ayaa dad kale sheegnaya, marka waxan leeyahay Dhul u dhacaaga Hubso”Ayey Faadumo Siciid Tidhi.
Faadumo Siciid wax ay sheegtay in hadalkaasi ka soo baxay Madaxweynaha Somaliya uu Burburiyey Wadda hadaladii Somaliland iyo Somaliya. “Horta Madaxweynaha Somaliya wax uu jabiyey Qodob ka mid ah Qodobadii lagu heshiiyey ee Shirkii Turkiga ee Somaliland iyo Somaliya Dhex maray ee Odhanayey yaan Hadalo Turxaan leh lagu hadlin, Si Aanu wada hadaladii anay u burburin, kolay Qodobaasi way jabiyeen, oo waayo Dee Qadiyadeeni ayey inagu yimadeen waxna ka sheegen mid
loo dulqadan karana ma ah.”
Faadumo Siciid Waxay tageertay Go’aankii Wasaradda Duulista iyo hawada ee Somaliland ku joojisay Duulimaadyada Qaramadamidooba, iyada oo Sheegtay in go’aankasi ahaa mid geesinimo ah oo Sharafta wadankeena kor u qaaday Tusayna Qaramadamodoobay in Hawadeena aynu inagu Maamulano ee aan Muqdisho laga maamulin.
Guddomiyaha Ururka ODHA.Faadumo Siciid wax kale oo ay ka hadashay Safar ay dhawaan kaga soo laabtay Waddamada Yurub waxayna Xustay in shacabka reer Somaliland ee Qurbaha ku nooli ay Qadiyadda Somaliland ay meel adag ka taagan yihiin, oo ay ka mideeysan yihiin Difaaca Qaranimada Somaliland, Dhigii u daatay Somaliland markii la Xoreynayeyna mid ka badani u dadan karo haddii loo bahdo.